Wed, May 27, 2020 at 11:46am
गर्मी मौसममा छालाको हेरचाह यसरी गर्न सकिन्छ ...
बिहिवार, जेष्ठ ३०, २०७६ साल
एजेन्सी, ३० जेठ अब विस्तारै गर्मी बढ्न थालेकाे छ । अबकाे समय भनेकाे हामीले हाम्राे स्वास्थ्यकाे विशेष चासाे राख्नुपर्छ । अझ गर्मीमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको घामले डढेर छाला कालो हुनु हो । गर्मी मौसम छाला सम्बन्धी रोगका लागि पनि सवंदनशील मौसम मानिन्छ । यस समयमा सूर्यको किरणको ताप चर्को हुने तथा वातावरणमा सूक्ष्म जीवाणु समेत देखा पर्ने गर्छन् । सूर्यको किरणले छालालाई..
गाजरको नियमित सेवनले मुटुरोग तथा क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ !
काठमाडौँ, ३० जेठ गाजर जमीनमुनि रहेको जरा रूपान्तरित भई केही मोटो हुने वनस्पति हो । यसको जरा खाद्यपदार्थको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । गाजरका विभिन्न फाइदाहरु छन् । बैज्ञानिकहरुले गाजर खानामा समावेश गर्दा मुटुरोग तथा क्यान्सरबाट बच्न सकिने यसअघि नै पुष्टि गरिसकेका छन् । गाजर खानाले दाँतको दोहोरो बचाव हुन्छ । जसका कारण गाजरलाई धेरैबेला सम्म चपाउने गरिन्छ मुखमा प्रसस्त मात्रामा र्याल निस्किन्छ..
दाङको एउटै वडामा १ सय ३८ बालबालिका कुपोषित
लमही, ३० जेठ । दाङको एउटै वडामा १३८ जना बालबालिका कुपोषित भएको भेटिएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ का १३८ बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको हो । तीमध्ये ४७ जना बालबालिका मात्र सम्पर्कमा आएको र अन्य बालबालिकाहरु सम्पर्कमा नआएको स्वास्थ्य चौकी टरिगाउँका फोकल पर्सन रेणु केसीले जानकारी दिनुभयो । “हाम्रो वडा नं ११ मा १३८ जना बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर ४७ जना..
विज्ञचिकित्सकसहितको उच्च गुणस्तरीय उपकरणका कारण बिरामीको रोजाइमा भरतपुर अस्पताल
चितवन, ३० जेठ । यहाँको सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पतालमा उपचार गर्नका लागि लामो समय पालो कुर्नुपर्छ । प्रचण्ड गर्मीका कारण असिनपसिन भएर पनि यस क्षेत्रका बिरामीको उपचारमा पहिलो रोजाइ भने यही अस्पताल हुने गरेको छ । जिल्लामा दुई सुविधासम्पन्न मेडिकल कलेज र २५ भन्दा बढी साना–ठूला अस्पताल छन् । पालो पाएसम्म अधिकांश बिरामीको रोजाइ सरकारी अस्पताल हुने गरेको छ । नेपाल चिकित्सक..
पेनकिलरको काम गर्ने यी ५ खानेकुरा
बुधबार, जेष्ठ २९, २०७६ साल
काठमाडौँ, २९ जेठ टाउको दुख्दा, हाडजोर्नी दुख्दा, पहिलो चोटि जिम गरेर शरीरका मांशपेसी दुख्दा अनि शरीरमा विभिन्न किसिमका दुखाइहरू हुँदा अधिकांशले पेनकिलर औषधीको प्रयोग गर्छन्। यो कुरा जान्नुहोस् कि, त्यस्ता पेनकिलर औषधीहरूले तपाईँको दुखाइ त कम गर्छ, साथसाथै त्यसले विशेष गरी तपाईँको कलेजोलाई सबैभन्दा बढि असर गर्दछ। त्यसैले पेनकिलर औषधीको अत्याधिक सेवन गर्नुभन्दा निम्न प्रकारका स्वस्थवर्द्धक अनि प्राकृतिक खानेकुराहरू खानुहोस्। यी खानेकुराहरूले पनि..
बिहान ७ः०० बजेदेखि दिउँसो ११ः०० बजेसम्म डेङ्गु नियन्त्रण गर्न मालाथिन औषधि छर्कँदै
विराटनगर, २९ जेठ । विराटनगर महानगरापलिकामा डेङ्गु ज्वरोका सङ्क्रमित बिरामी देखिन थालेपछि बुधबारदेखि यस क्षेत्रमा औषधि छर्किने कार्य शुरु गरिएको छ । धरान उमहानगरपालिकमा सो रोगबाट सङ्क्रमित बिरामी अत्यधिक देखिएकाले नियन्त्रणका लागि नगरका सम्पूर्ण वडामा बुधबारदेखि मालाथिन फगि स्प्रे(छर्केने) कार्य शुरु गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरले बुधबार वडा नम्बर १, २, ३, र १० , यही जेठ ३० गते १, ३,..
गाउँपालिकाको सबै वडामा स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क मुटु परीक्षण
मंगलवार, जेष्ठ २८, २०७६ साल
मुग्लिन, २८ जेठ । चितवनको एक मात्र गाउँपालिका इच्छाकामना गाउँपालिकाको सबै वडामा स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ । गाउँपालिकाले यसअघि स्वास्थ्य सेवा नपुगेका वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरेपछि सबै वडामा स्वास्थ्य सेवा पुगेका हुन् । गाउँपालिकाले सबै नागरिकलाई वडाबाटै स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यसहित यसअघि स्वास्थ्य सेवा नपुगेका वडा र दुर्गम बस्तीमा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङले बताउनुभयो ।..
सोमबार, जेष्ठ २७, २०७६ साल
काठमाडौँ, २७ जेठ सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ५१ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गरेको छ । सूचीकरणका लागि आवेदन दिएका १२६ स्वास्थ्य संस्थाको अनुमगन गरी मापदण्ड पूरा गरेका ५१ स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले गत चैत १३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चाहने..
१ हप्ताको अस्पताल बसाइँपछि मुख्यमन्त्री पौडेल डिस्चार्ज
हेटौँडा, २७ जेठ मुटुको भल्बमा समस्या देखिएर अस्पताल भर्ना हुनुभएका प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल डिस्चार्ज हुनुभएको छ । यही जेठ १९ गते अस्पताल भर्ना हुनुभएका मुख्यमन्त्री पौडेल १ हप्ता अस्पताल बसाईपछि डिस्चार्ज हुनुभएको हो । नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा मुटुमा समस्या देखिएपछि उहाँको एनजिओप्लाष्टि गरिएको थियो । मुटुको नियमित परीक्षणका लागि काठमाडौँको शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग निवारण केन्द्रमा..
जीवन—मरणको संघारमा रहेकी रविनाले पाइन् नयाँ जीवन
काठमाडौँ, २७ जेठ । आठ वर्षसम्म जीवन मरणको संघारमा रहेकी दाङ्ग जिल्ला तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ की रविना योगी मलद्धारको शल्यक्रिया भएपछि नयाँ जीबन पाएकी छन् । आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको परिवारको सदस्य रहेकी योगीको अवस्थाको जानकारी पाउना साथ बसुन्धरास्थित ग्रीनसिटी अस्पतालले आफ्नै अस्पतालमा बोलाई उनको निःशुल्क अप्रेशन गरिदिएपछि उनको परिवारले आफनो छोरीले नयाँ जीवनपाएको बताएको छ । वरिष्ठ वालशल्य चिकित्सक..
मुख गन्हाउने समस्याले क्यान्सर पनि हुन सक्छ !
काठमाडौँ, २६ जेठ मुख गन्हाउने समस्याले व्यक्तिको व्यक्तित्वमा नै नराम्रो प्रभाव पार्छ । यस्तो समस्या हुँदा मुखबाट नमीठो दुर्गन्ध आउँछ । जसले मुख र शरीर स्वस्थ छैन भन्ने स्वतः बुझाउँछ । साथै, मुख गन्हाउने समस्या भएका मानिस अलि कमजोर र मानसिक रूपमा डिपे्रसनमा हुन्छन् । आफ्नो सास आफैँलाई नगन्हाउने भएकाले यसबारे थाहा पाउन दन्तचिकित्सककोमा देखाइराख्नुपर्छ । यदि, लामो समयदेखि मुख गन्हाउने समस्या छ..
सिन्धुपाल्चोकमा झाडापखलाको महामारी, एकै गाउँका ५० जना बिरामी
मेलम्ची, जेठ २६ । सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–५ स्थित विन्जेलमा झाडापखलाको महामारी फैलिएको छ । झाडापखलाका कारण एकै गाउँका ५० बढी बिरामी भएका छन् । केहीको स्थिति गम्भीर रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । विरामीको खाडिचौरस्थित सिन्धु सदाबहार अस्पताल र स्थानीय मेडिकलमा उपचार भइरहेको छ । अस्पतालको एउटै शय्यामा तीनजनासम्म विरामी राखेर उपचार भइरहेको स्थानीय मिलन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । विरामी..
‘हर्ट अट्याक’ हुन लागेको पहिल्यै नै यसरी थाहा पाउनुहोस्
काठमाडौं, २५ जेठ अस्वस्थ्य खानपान, योग व्यायाम, शारीरिक कसरतअदीका कमीका कारण हृदयघात समस्यामा बृद्धि भइरहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । जसका कारण बेलैमा यसबारे सचेतता अपनाउन सकियो भने यसको असरलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । हृदयघात हुँदैछ भनी सचेत गराउने संकेतहरू शरीरले पहिल्यै दिन्छ । हुन त सबैलाई यस्तो संकेत आउँछ भन्ने छैन तैपनि शरीरले कुनै न कुनै किसिमको संकेत भने दिन्छ ।..
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र संस्था सम्मानित
बेझाड, २४ जेठ रामपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थालाई सम्मान गरेको छ । सम्मानित हुनेहरुमा गाडाँकोट स्वास्थ्य चौकीका निशा सारु, दर्छा स्वास्थ्य चौकीका कृष्णप्रसाद वाग्ले, रामपुर अस्पतालका धनबहादुर सारु, खालिवन स्वास्थ्य चौकीका अनिताकुमारी खड्का र गेझा स्वास्थ्य चौकीका श्रीकान्ती भण्डारी रहेका छन् । त्यस्तै रामपुर नगरपालिकाभित्र रहेका नौ स्वास्थ्य संस्थामध्ये गाडाँकोट स्वास्थ्य चौकी र गेझा स्वास्थ्य..
सप्तरीका १ सय बढी महिलामा पाठेघरको क्यान्सरको आशङ्का
सप्तरी, २३ जेठ । ‘स्वस्थ्य नगरपालिका, समृद्ध नगरपालिका’ नाराका साथ सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा छ दिनसम्म सञ्चालित आङ खस्ने रोग तथा पाठेघर मुखको क्यान्सर जाँच शिविरमा एक हजार २४९ बिरामीले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् । स्वास्थ्य शाखा कञ्चनरुपको आयोजनामा कञ्चनरूप–८ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सञ्चालित शिविरमा ८३८ ले आङ खस्ने रोग र ४११ जनाले पाठेघरको मुखको जाँच गराएका नगरपालिकाले जनाएको छ । तीमध्ये..
ऐन २०७५ ले चिकित्सा क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउँछ : मन्त्री पोखरेल
विराटनगर, २३ जेठ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ ले चिकित्सा शिक्षा र सेवामा रहेको विकृति हटाउने बताउनुभएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा यहाँ बिहिबार आयोजित राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन ,२०७५ अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दैै उहाँले ऐनले निजी चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा भएका विकृति अन्त्य गरी दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि पूँजी लगानीमा प्रोत्साहन गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो..
‘म स्वस्थ मेरो नगर स्वस्थ’ अभियान शुरु
लम्की, २३ जेठ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले ‘म स्वस्थ, मेरो नगर स्वस्थ’ अभियान शुरु गरेको छ । नगरपालिकाले ‘स्थानीय जनताको स्वस्थता, नगर सरकारको प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ नगर स्वस्थ अभियान शुरु गरेको हो । अभियानअन्तर्गत नगरपालिकाले पहिलो चरणमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, पत्रकार, शिक्षक, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई सामाजिकरुपमा प्रतिबद्ध गराउन थालेको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक कार्यक्रममा सामूहिक प्रतिबद्धता गर्न लगाएर सामाजिक सञ्जालमा हाल्न थालेको छ..
तामा : स्वादका हिसाबले जति मीठो, स्वास्थ्यका लागि पनि उत्तिकै लाभदायक
बुधबार, जेष्ठ २२, २०७६ साल
काठमाडौँ, २२ जेठ आलु–तामा भनेपछि मुख नरसाउने को होला ? बाँसको तामा स्वादका हिसाबले जति मीठो हुन्छ, यो स्वस्थ्यका लागि पनि उत्तिकै लाभदायक छ । बजारमा केतुकेलगायत विभिन्न वनस्पतिका तामा पाइए पनि बाँसको तामाको सिजन भनेको वर्षयाम नै हो । त्यही तामा मानिसको स्वास्थ्का लागि कत्तिको फाइदाजनक छ हेरौँ : बाँसको तामामा न्यून क्यालोरी हुने हुँदा वजन घटाउन मद्दत पुर्याउँछ । -तामामा कम कार्बोहाइड्रेड..
गुरुयोजनाअनुरुप काम गर्न भरतपुर अस्पताललाई जग्गाको अभाव
चितवन, २२ जेठ भरतपुर अस्पतालको नाममा रहेको जग्गा बाँड्दै गएपछि अहिले गुरुयोजनाअनुरुप काम गर्न अस्पताललाई नै जग्गाको अभाव देखिएको छ । अस्पतालको नाममा रहेको ३० बिगाहा ११ कट्ठा ६ धुर जग्गा बाँड्दा बाँड्दै अस्पतालसँग अहिले १० बिगाहा जग्गा मात्र बाँकी रहेको छ । गुरुयोजनाअनुरुप काम गर्न अस्पताललाई कम्तीमा १५ बिगाहा जमीन आवश्यक पर्छ । अस्पतालले २० बिगाहाभन्दा बढी जमीन निजी, गैरसरकारी र..
जान्नुहोस् गर्मीमा पानी कसरी र कति पिउने ...
काठमाडौं, २१ जेठ काठमाडौंका साथसाथै तराईका जिल्लाहरुमा झन् गर्मी बढ्दो छ । गर्मीको समयमा पानीको कमीका कारण एलर्जीको समस्या धेरैमा हुने गर्छ । पानी शरीरको लागि अत्यावश्यक तत्व हो जुन हाम्रो शरीरमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको हुन्छ । शरीरमा पानी कम भएकाम विशाक्त पदार्थ सहज रुपमा बाहिर निक्लन पाउँदैनन् र समस्याहरु निम्तन सक्छन् । शरीरमा पानीको कमीले शरीमा फ्याटको मात्रा बढ्न पुग्छ भने पाचन..
१० हजार जनसङ्ख्यामा १ कुष्ठरोगी, तथ्यांक हेर्दा जे देखियो...
डोटी, २१ जेठ सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्लामा प्रति १० हजार जनसङ्ख्यामा एक कुष्ठरोगी रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले कैलाली, कञ्चनपुर र अछाम जिल्लामा अझै कुष्ठरोग निवारण नभएको जनाएको छ । नेपालमा कुष्ठरोग निवारणको घोषणा १० वर्ष पुगे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै निवारण नभएको निर्देशनालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा कुष्ठरोगीको सङ्ख्या बढ्दै गरेको..
प्रधानमन्त्रीबाट मुख्यमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थितिबारे जानकारी
काठमाडौँ, २१ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपचाररत प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ । बाँसबारीस्थित शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग निवारण केन्द्रमा मंगलबार बिहान पुगी उहाँले त्यहाँ मुटुको शल्यक्रिया गराउनुभएका मुख्यमन्त्री पौडेलको अवस्था बुझ्नुभएको थियो । मुटुरोग विशेषज्ञ डा चन्द्रमणि अधिकारीको टोलीले उहाँको उपचार गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री पौडेको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको उहाँका स्वकीय सचिव..
कटारी अस्पतालका प्रसूति गराउने चिकित्सक टोली पुरस्कृत
रसुवा, २१ जेठ । उदयपुरको कटारी नगपालिकाको कटारी बजारस्थित कटारी अस्पतालमा शल्यक्रियासहित प्रसूतिसेवा सञ्चालनमा आएको छ । अस्पतालले आफ्नै व्यवस्थापनमा उक्त सेवा सञ्चालन गरेको हो । सोमबार साँझ कटारी नगरपालिका–५ बरमझियाकी २४ वर्षीया फुलकुमारी दनुवारको शल्यक्रिया गरी प्रसूति गराइएको अस्पतालका प्रमुख डा पवनकुमार साहले बताउनुभयो । सुत्केरी व्यथा लागेर दुई दिनदेखि कटारी अस्पतालमा भर्ना भएकी दनुवारको डा साह, नर्स छवित्रा राई र..
रातभर अनिंदो रहने तथा पर्याप्त नसुत्नेलाई मुटुरोगको यस्तो जोखिम
काठमाडौँ, २० जेठ एक अध्ययनले राति ६ घन्टाभन्दा थोरै निदाउने व्यक्तिको मृत्यु मुटुको रोग, हृदयघातबाट हुने जोखिम दुई गुणा बढ्ने देखाएको छ। एउटा नयाँ अध्ययनले राति ६ घन्टाभन्दा थोरै सुत्ने व्यक्तिको मृत्यु मुटुसम्बन्धी रोग वा हृदयघातबाट हुने जोखिम बढ्ने देखाएको छ। अध्ययनका अनुसार पहिले नै मुटुसम्बन्धी रोग र मधुमेहसम्बन्धी जोखिममा रहेका व्यक्तिमा यस्तो मृत्युको जोखिम दुई गुणा रहन्छ। ‘मेटाबोलिक सिन्ड्रोम’ भनिने यो जोखिम..
नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वरमा बिरामीको संख्या बढ्दो
काठमाडौँ, २० जेठ नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वरमा आँखाका बिरामी बढ्दै गएका छन् । विस २०३० चैत २६ मा स्थापना भएको अस्पतालमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको धुलोधुँवा, वायुप्रदूषण र बढ्दो सामाजिक सञ्जालकोे प्रयोगसँगै आँखाका बिरामी बढेका हुन् । अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दमनबहादुर घलेले नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै आँखाका बिरामी बढेको बताउनुहुन्छ । “पहिला दैनिक ३०० व्यक्तिले बहिरङ्ग( ओपिडी) सेवा र दैनिक पाँच जनाले शल्यक्रिया..
दैनिक १८ घण्टासम्म क्रियाशील रहने मुख्यमन्त्री पाैडेल एक हप्ताका लागि अस्पताल भर्ना
हेटौँडा, २० जेठ । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल एक हप्ताका लागि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ । नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल जानुभएका पौडेललाई अस्पतालले एक हप्ताका लागि भर्ना गरेको हो । मुख्यमन्त्री पौडेल मुटुको नियमित परीक्षणका लागि काठमाडौँको शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग निवारण केन्द्रमा आइतबारबाट भर्ना हुनुभएको हो । त्रिहत्तर वर्षीय पौडेल प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ज्येष्ठ हुनुहुन्छ । निकै सक्रिय दिनचर्या..
धरानमा डेङ्गु नियन्त्रण बाहिर : बिरामीको सङ्ख्या ७५ पुग्यो, चाप बढेपछि श्यया अभाव
आईतवार, जेष्ठ १९, २०७६ साल
धरान, १९ जेठ धरानमा डेङ्गुका बिमारीको सङ्ख्या ७५ पुगेको छ । धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ६२ र विजयपुर हस्पिटलमा उपचार गराउने १३ जना गरी ७५ पुगेको हो । धरान उपमहानगरपालिका र बिपी प्रतिष्ठानले बनाएको संयुक्त र्यापिड रेस्पोन्स टिमले प्रत्येक घरमा पुगेर घरको अवस्था निरीक्षण गर्दा डेङ्गु सङ्क्रमित लामखेट्टेको अण्डा र लार्भा अत्यधिक पाइएको जनाएको छ । धरानमा डेङ्गु नियन्त्रणबाहिर रहेको चिकित्सकहरुले..
बच्चाको ज्वरो घटाउने यस्ता छन् सजिलो उपाय
काठमाडौँ, १९ जेठ शिशुलाई ज्वरो आए सँगै अभिभावक पनि शारिरिक र मानसिक रुपमा पीडित हुन्छन्। तर ज्वरो संक्रमणबिरुद्ध जुध्ने शरिरको आफ्नै तरिका हो। कतिपय अवस्थामा ज्वरो एक भाइरल संक्रमण हो जुन आफैं बिस्तारै निको हुन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि बच्चालाई उपचार र हेरचाहको आवश्यकता छैन। शिशुलाई उच्च ज्वरो आउँदा निम्न विषयमा बिचार पुर्याउनुपर्छ। एन्टिबायोटिक दिन हतार नगर्नुहोस्। हो कतिपय अवस्थामा १०१,..
दैनिक कम्तिमा एउटा ल्वाङ्ग खाएमा हुनेछ यस्ता फाईदा
एजेन्सी, १८ जेठ ल्वाङ हाम्राे भान्छाघरमा सजिलै पाईने बस्तु हो । यसलाई हामी बिभिन्न परिकारमा मसलाको रुपमा प्रयोग गरिन्छ साथै बिभिन्न रोगको उपचारको लागि प्रयोग गर्दै आईरहेको हामीले देखिरहेका पनि छौँ । वास्तवमा नै ल्वाङ्गले हाम्रो स्वास्थ्यमा धेरै फाईदा पुर्याउँछ । तपाई दैनिकी एउटा ल्वाङ्ग रातमा ७ दिन सम्म खानुस यसले के–के फाईदा गर्छ तल बताईएको छ । फाइदाहरू यदि पेटको समस्या छ भने..
सुर्ती सेवनबाट नेपालमा प्रत्येक वर्ष २५ हजारको मृत्यु
काठमाडौँ, १८ जेठ । सुर्ती सेवनबाट नेपालमा बर्सेनि २५ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति तथा योजना शाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटाले सुर्ती सेवनको असर डरलाग्दो बनिरहेको बताए । मन्त्रालयले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको विश्व सुर्तीजन्य पदार्थरहित दिवस एवं स्वास्थ्यमन्त्री ब्लुम्बर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा डा. देवकोटाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । देवकोटाले..
Results 1322: You are at page 21 of 45